Kulankii xalay ee Madaxtooyda oo lagu go'aamiyay in maanta hub iyo daawo gurmad ah loo diro GalgaduudMuqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia | Muqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia
Home Wararka Kulankii xalay ee Madaxtooyda oo lagu go’aamiyay in maanta hub iyo daawo...
Kulankii xalay ee Madaxtooyda oo lagu go’aamiyay in maanta hub iyo daawo gurmad ah loo diro Galgaduud
Madaxweyne Farmaajo ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu kulan la qaatay qaar ka mida raga horseedka ka ah dagaalka ka socda degaanka Galgaduud iyo xuduuda Soomaaliya iyo Itobiya. Kulanka xalay dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Xildhibaano iyo Wasiiro ay ku jiraan Xildhibaan Cabdishakur Cali Mire, Cabdi Shire Ciyaal Jecel iyo Eng Bashiir.
Kulanka ayaa waxaa la isku waafaqay in hub iyo daawo deg deg lala gaarsiiyo deegaanka. Farmaajo oo u muuqda mid iska bari yeelayo dhibka ka jira gobolada Dhexe ayaa waxa uu la kulmay taliyihii hore ee ciidanka Xooga Dalka Janaraal Cabdiwali Gorod oo ka soo jeeda beesha Sacad ee dagaalka kula jirto beesha Mariixaan. Gorod ayaa eed dusha uga tiiray hogaanka Madaxweyne Xeef oo uu sheegay in uu ka danbeeyo dagaalka ka socda Galgaduud iyo Mudug. Cabdiwali Gorodf ayaa in mudo ah da’daal ugu jiro in lagu badalo Madaxweyne Xeef.
Waxaan shaki ku jirin in colaada ka socota degaanka Galgaduud ay ka sii dari doonto hadii MW Farmaajo hub iyo kaalmo dowladeed u diro beesha uu ka dhashay oo qayb ka ah dagaalka.
Maalintii shalay ahayd ayaa odoyaasha dhaqanka ee ka soo jeeda degaanka dagaalka ka socdo ay baaqa soo saareen kaas oo ay ku codsanayaan in dagaalka si dhaqso ah loo joojiyo dowlada Fedaraalkana ay joojiso si hurinta coladaas.
Previous articleWeerar caawa ka dhacay Boosaaso iyo xaalada oo kacsan
Next articleGaroomada Diyaaradaha Soomaaliya oo dib u habeeyn lagu sameeyn doono
Axmed Madoobe oo Xalay Afur u sameeyay Xildhibaanada Jubbaland (Aqriso sababta kulankaasi)
Wiil Soomaaliyeed oo lagu dilay Rinkeby Stockhom (Faah-faahin)
Madaxweyne Deni oo ka hadlay Safarkiisa Shiinaha
Who will benefit Kenya’s political bullying?
Faysal - May 26, 2019
Kenya is the only country in the region that has benefited immensely from the collapse of the Somali nation and its interest lies in...
English May 26, 2019
New Islington Mayor, Rakhia Ismail, is the UK’s first Somali-born woman Mayor
English May 25, 2019
Why Uhuru won’t be at swearing-in fete of president Ramaphosa
English May 24, 2019
Kheeyre oo kulamo gooni gooni ah ka wada Garoowe
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka oo ka hadlay geeridii wasiir xoosh